Sunday April 05, 2020 - 16:35:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Taliska ciidanka Mareykanka ayaa shaaciyay in saldhigga Alxabaaniyah ee gobolka al-anbaar ay ku wareejiyeen ciidamada xukuumadda dabadhilifka baqdaad ee shiicadu ku badantahay.
Saraakiisha Americanka ah waxay sheegeen in saldhiggan oo 8 KM ujira magaalada Ramaadi ay ku shaqeynayeen ciidamo isku dhaf ah oo dhammaantood hoos tagayay isbahaysiga mareykanku hoggaaminayo ee Ciraaq loo geeyay si ay ukala gaabiyaan muslimiinta sunniga ah.
wariyaal ayaa soo sheegay in ciidamada Americanka ah ee isaga baxay saldhigga alxabahaaniyah ay qalab melleteri iyo saad kale ku wareejiyeen ciidamada xukuumadda ciraaq uu degay saldhiggan.
Bishii lasoo dhaafay ayay ciidamada Mareykanka sidaan oo kale uwareejiyeen gacan ku haynta saldhigyo melleteri oo kuyaal waqooyiga Ciraaq kuwaas oo kala ahaan K1 oo gobolka Karkuuk katirsan iyo saldhigga alqayaara ee kuyaal gobolka Naynawa, sidoo kale ciidamo faransiiska ah ayaa isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay saldhig melleteri oo ay ku lahaayeen magaalada alqaa'im ee dhacda xuduud beenaadka uu ciraaq lawadaago suuriya.
Mas'uul uhadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in inkastoo ay saldhigyo badan faarujiyeen hadane ay ka walaacsanyihiin weeraro hubaysan oo uga yimaad taageerayaasha iiraan ee dalka Ciraaq.